Dawladda federaalka Soomaaliya - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Dowlada Federaalka Soomaaliya)
Heesta qaranka: Qolobaa Calankeed
Magaalo madax Mogadishu
- Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed
- Aqalka sare Aqalka sare
- Aqalka hoose Aqalka hoose
- Dastuurka kumeel gaarka ah 20 Agoosto 2012
(9 sanadood, 5 bilood, iyo 4 maalmood dhaaftay)
Dawladda Federaalka Soomaaliya (; ; ) waa dawlad ay caalamku aqoonsanyihiin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
1 Dulmar guud
Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay dhisantay Agoosto 20, 2012 dhamaadkii dawladdii kumeel gaarka ahayd TFG.
Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go'aaminaya
Madaxweyne: Xasan Sheekh Maxamuud.
Baarlamaanka Qaranka Soomaaliya. waxaa la unkay Agoosto 2012, xaruntiisana waxay ku taalaa Muqdisho waxa uuna ka koobanyahay laba aqal, oo ukala baxa Aqalka sare (Aqalka sare wali lama soo xulin waxaana awooda la siiyey madaxweynaha) sidoo kale waxaa jira Aqalka hoose kaasoo loola jeedo 275 xildhibaan.
Maxkamadda Sare oo ku taal Muqdisho Gudoomiyaheedana waxaa soo doordta Madaxweynaha.
1 Somaliland 1991 Oo sheegatay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale
2 Puntland 1998
3 Galmudug 2008
4 Ximin iyo Xeeb 2010
5 Ceelbuur state 2011
6 Mareeg State 2010
7 Hiiraan state 2011
8 Banadir State 2012
9 Jubbaland 2010
10 Khaatumo State 2011
11 Awdalland 2010
(FG) Waxaa laga yaabaa Qaarkood in aan la dhisin oo ay ujiraan magac ahaan.
Soomaaliya Malahan manhaj mideeysan ee wax barasho, waxaa ka jira Dugsiyo iyo jaamacado si gaar ah loo leeyahay.
Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Gulaid
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, waxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood.
Soomaaliya malahan Ciidan habaysan kaas oo awooda hanashada amaanka Dalka iyo Xuduudihiisa, waloow ay dhisanyihiin ciidan gaaraya ugu yaraan 50,000 hadana waa ciidamo beeleedyo la isu-keenay.
Ciidamada Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika (Afrikada Madoow), marka laga eego Baaxadiisa iyo lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay. ciidanka Soomaaliya waxaa markaas Baaxadiisa lagu qiyaasaasi jiray inta u dhaxeeysa 350,000 ilaa 400,000 oo ciidan oo diyaar ah. Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay 1960kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga.
Magaalo Madaxda Soomaaliya Waxaa caasimad u ah Muqdisho Waxaana ku yaal Hooyga Madaxwenaha Villa Somalia , Wasaaradaha iyo Baarlamaanka.
Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dawladda_federaalka_Soomaaliya&oldid=204701"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Agoosto 2020, marka ee eheed 14:47.